Noqo qof kafaaideysta wakhtga! | Horumarka waxbarashada | Horumar | Mustaqbalka dadkeena iyo dalkeena
Noqo qof kafaaideysta wakhtga! | Horumarka waxbarashada
Published time : April 30, 2021 10:13
Assalamu calaykum, Wr, Wb
Kusoo dhowoow baaritaankii koowaad aan sameynay ee ku aadan qiimaha uu leeyahay wakhtigu iyo habka looga faaideysto. Waxaan kusiin doonnaa tusaalooyin iyo hab aad ku dejiso horumarka noloshaada ee waxbarashada.
Sida aan ognahay waxbarashadu waa horumarka qofka baniaadamka. Waxbarashadu waxaa la barbar dhigaa khibradaha. Qofka aan waxbaran wuxuu bedelkiisa shey kasta kaga baran khibrid awgeed. Tusaale ahaan haddii aadan qaadan buug iyo qalin si aad u baratid luuqad, waxaad arki xilli aad luuqadu si daran ugu baahantahay inaad ku hadashid laakiin aqoontu ku siineynin, markaas ayaad khibrad u adeesan. Inaad waddo caqliyadeesan umartid adigoo isleh ka gudub albaabka aqoon la'aan.
Wakhtiga ugu habboon wax barashada?
Canuga soo barbaaraya iyo dhalinyarada wakhtiga iyo caafimaadkaga haysta ayaa ugu maskax fiican dhanka waxbarashada iyo kafaaiideysigu. Dunida waxaa la dhahaa dhalinyaradu ayaa xoog ku maamula, dhallinne khibrad. Taasi waxaa keenaya, markii qofku awooddiisu yaraato, sii duqooba wuxuu fahmi qiimaha wakhtigu iyo haddii uu wax ka badali kari lahaa dunidiisu.
-- Anaga waxaan nahay ummad muslimiin ah -- Diinteenu maxey ka leedahay arrinkan?
Sida ku qoran axaadiista Rasuulka Muxammad Sallallahu Caleyhi Wasallam ( Ku salli xabiibka), Waxa uu kaga warramay " Ka faaiideysta/ Qaniimeyso shan inteysan shantoodu kale kuugu imaan"
Maanta dunidu waxey jaanis buuxa ku haleysaa internet, cunno, koronto oo dhan waliba kaaga saaciyada inaad hadaf lahaatid. Dhallinteennu wexey ka doorbidaan iney wakhtigoogu kulumiyaan game ama baraha bulshada ( social media). Ma aaminsano inuu taajir yahay, uu ku jiro xilligii qaniimeysiga.
Dhalinteenna akhrisaneysa blogaani waxaan ka codsaneynaa iney nala soo xeriiraan, waxaan isku dayi doonnaa inaan siinno arrimo horumarinaya noloshadooda sida waxbarashada ama ganacsiga internetka.
" Qaado koorsoodhin, midkii isleedahay waad u baahantahay" Haddii jiiraan walaac ku saabsan koorsaha rabtid qiimahiisa, fadlan noo soo dir farriin kusaabsan.
- Mahir Mohammed Abdirahman | Macalin - Horumar.net
Horumar waa bog loogu talagalay in lagu barto wax kasta ee qofka soomaaliga mustaqbalkiisa horumarinkara. Waxaan xaq uleenahay bogga qoraalkiisa, koorsoodhinka iyo sawirada.